Mmekọahụ tupu alụm di na nwunye nwere ọtụtụ uru - Bukola Adeeyo
Bukola Adeeyo, na-efe efe nke ukwuu Onye na-eme ihe nkiri Yoruba, arụrụla ụka maka ndị na -enwe mmekọ nwoke na nwanyị tupu alụmdi na nwunye. Ọ bụ ezie na Akwụkwọ Nsọ gbarụrụ ihu na ya, ọ kwenyere na ọ nwere uru ụfọdụ, ọ kọwara na N'ajụjụ ọnụ ya na Potpourri oge gara aga ihe kpatara na ebipụtaghị ya.
“Inwe mmekọahụ tupu alụmdi na nwunye nwere ọtụtụ abamuru. Enwere nnabata ndị ọgbọ, ihe ụtọ, na afọ ojuju nke agụụ mmekọahụ. Na ala, ọ na-emebi ụkpụrụ na ụkpụrụ anyị, na-ebute afọ ime na-achọghị, ọrịa na-ebute site na mmekọahụ (STDs), na ikpe ọmụma "ọ na-ekwusi ike.
Ọzọkwa, ọ na-agbagha echiche ahụ bụ na ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ karịa ụmụ nwoke.
“Nkwanye ùgwù ekwenyeghị. ,Mụ nwoke, n'aka nke ọzọ, ga-abụ ụmụ nwoke mgbe niile. A na-amụ ha ka ha na-elekọta, ọbụlagodi mgbe ha anaghị enwe mmekọahụ; nke a bụ usoro ebumpụta ụwa “ọ na-ekwupụta.
N'onwe ya, ọ na-ekwupụta echiche ya banyere mmekọahụ "Abụ m onye ji ọrụ n'aka nke na-anaghị enwekarị oge maka ihe ndị dị otú ahụ. M na-enwe mmekọahụ mgbe ụfọdụ, ma anaghị m enwe mmekọahụ, ọ bụghịkwa ngwá ọrụ metụtara mmekọahụ. ”
Bukola Adeeyo malitere ọrụ ime ihe na 2008 n'okpuru ọkọlọtọ nke Odunlade Adekola Films Mmepụta (OAFP). Kemgbe ahụ, o wepụtara onwe ya dịka ike ụlọ ọrụ a ga -agụkọ na ya.
Etu esi lelee Nọmba Airtel - Maka Ndị Ọrụ Ọhụrụ Nwere ike 4, 2021
Emeka Stallion Na Blaqbonez: Na Mmekọahụ Banyere .hụnanya April 25, 2021
Ndị otu APC eyila egwu na ha ga-akọ Mbaka na Vatican, Pope Francis kwetakwara ime nke a April 30, 2021
FG nwere oge imepe iji hibe ulo oru NDDC dika IYC yiri egwu igbapu. April 27, 2021
Ndi Nigeria Diaspora Network kwere nkwa inye $ 10 nde maka nkwado nke ịzọ ọchịchị Naịjirịa na 2023, ka onye nkwuchite ya kwuru. April 29, 2021
Ex-Minister Aisha Al-Hassan, nke a na-akpọkwa "Mama Taraba," nwụrụ. Nwere ike 7, 2021
FG akwụsịla ịkwụ ụgwọ ụlọ na ụgwọ ọnwa dọkịta. April 24, 2021
Tags:adekola, bukola adeeyo, odunlade adekola, odunlade adekola films, onye omee yoruba